Runtii ma rabtaa inaad ku shaqeyso bilowga? | Martech Zone
Runtii ma rabtaa inaad ku shaqeyso bilowga?
Khamiis, Janaayo 8, 2009 Axad, Juun 21, 2015 Douglas Karr
Ma jiro wax dareen ah oo aad uga xun mindhicirkaaga marka loo eego marka shaqada lagaa kaxeeyo. Waxaan si bilaa caqiido ah la ii siiyay bootka 6 sano ka hor markii aan u shaqeynayay wargeys gobolka ka soo baxa. Waxay ahayd qodob muhiim u ah noloshayda iyo xirfadayda. Waxaan u baahday inaan go’aansado inaan dib ugula dagaallamayo guul weyn - ama haddii aan sii joogayo iyo haddii kale.
Dib markaan u milicsado, xaaladdaydu waxay ahayd mid si daacadnimo ah nasiib u leh. Waxaan ka tagay warshad sii dhimanaysay waxaanan ka tagay shirkad imika loo yaqaan mid ka mid ah shaqo bixiyeyaasha ugu xun ee loo shaqeeyo.
Shirkada bilowga ah, fursadaha guusha ayaa lagaa doonayaa adiga. Kharashaadka shaqaalaha iyo soo-celinta waa mid ka mid ah maalgashiyada ugu isbedbedelka badan ee ay sameyn karto shirkad bilow ah. Shaqaale weyn ayaa cirka isku shareeraya meheradda, shaqaalaynta liidata ayaa aasi karta.
Wax kale ayaa ka dhaca bilowga guuleysta, in kastoo. Shaqaalaha maalin weynaa waxay u baahan karaan in loo fasaxo mid kale. Shirkad shan shaqaale ah aad ayey uga duwan tahay shirkad leh 10, 25, 100, 400, iwm.
3-dii sano ee la soo dhaafay, waxaan ka shaqeeyay 3 bilow ah.
Hal bilow ayaa iga sii weynaaday processes hababkii iyo qaababkii maamulka ayaa i xiiqay waana inaan ka tagaa. Iyaga khaladkooda ma ahayn, runtiina waxay ahayd inaanan 'taam' ka ahayn shirkadda. Waxay sii wadaan inay sifiican usameeyaan walina wey ixtiraamaan. Mar dambe ma aanan sii jiri karin.
Bilawgii ku xigay ayaa i daalay! Waxaan ka shaqeeyey warshad qallafsan, shirkad aan lahayn ilo dhaqaale. Waxaan siiyay hal sano oo mustaqbalkeyga ah waxaanan siiyay wax walba oo aan ahaa - laakiin ma jirin waddo aan kusii wadi karo xawaaraha.
Waxaan la joogaa bilow hadda waxaan dareemayaa inaan aad ugu faraxsanahay. Waxaan joognaa ilaa 25 shaqaale hadda. Waxaan jeclaan lahaa inaan si rajo leh u sheego inay noqon doonto shirkadda aan ka fariisto; si kastaba ha noqotee, qallafsanaanta aniga ayaa iga soo horjeeda! Markaan garaacno dhowr boqol oo shaqaale ah, waxaan arki doonaa sida aan ula qabsan karo. Markan, waxaan fure u ahay guusha shirkadda sidaa darteed waxaan sii joogi karaa 'kana sarreeyaa dhibaatada' xafiiska shaqada waxaanan si adag uga shaqeynayaa sidii loo ilaalin lahaa dhaqdhaqaaqa iyo horumarka iyadoo loo marayo koritaanka ballaaran.
Dadka qaarkiis waxay u maleyn karaan in bilaabitaanku yahay shaqo-bixiye arxan-daran haddii ay leeyihiin shaqaale sare Ma aaminsani sidaas… bilaabitaanno aan lahayn wax xasaasi ah oo aniga iga sii welwel badan. Waxaa jira marxalado nolosha bilowga ah oo ku shaqeeya xawaare hillaac ah marka loo barbar dhigo shirkad la aasaasay. Shaqaalaha qaar ayaad xiratay oo waad ka badnaan doontaa xitaa. Nasiib darrose, tirada shaqaaluhu way yar yihiin bilowga marka fursadahaaga dhaqdhaqaaqyada dambe waa ku yar yihiin midna.
Tani waxay u muuqan kartaa naxariis-laawe, laakiin waxaan doorbidayaa bilowga badhitaanka shaqaalaha badhkood intii aan waayi lahaa dhammaantood.
Marka… hadaad runti dooneysid inaad u shaqeysid shirkad bilow ah, ka dhig shabakadaada mid dhow oo keydso xoogaa lacag ah inta lagu guda jiro diyaarinta. Wax ka baro waayo-aragnimada sida ugu badan ee aad kari karto - sanad bilow caafimaad leh ayaa ku siin kara toban sano oo waayo-aragnimo ah. Inta badan dhammaantood, hel maqaar qaro weyn.
Miyaan jeclaan lahaa inaan u shaqeeyo bilowga? Haa… maya. Farxadda, caqabadaha maalinlaha ah, sameynta siyaasadaha, kobaca shaqaalaha, soo degitaanka macmiil muhiim ah… kuwan dhammaantood waa waayo-aragnimo cajaa'ib leh oo aanan waligey ka quusanin!
Jaantus waxa aad ku fiican tahay, ha la yaabin haddii albaabka lagu gelbiyo, oo aad u diyaar garowdo inaad weerartid fursadda weyn ee xigta adigoo leh khibrad aan qiimo lahayn oo aad soo dhistay.
Seth Godin Wuu ila Wadaa!
Kobaca Twitter ma Muhiimbaa?
Dhamaan sidani waa run! Xaqiiqdii waan cadeyn karaa inbadan oo ka mid ah qodobadan, bilowga 10 shaqaale waxay ushaqeeyaan si kadis ah markay leeyihiin xoogaa guul ah iyo 100 shaqaale ah, iwm. Marwalba waa wax xiiso leh in la arko iyadoo socota.
Hal shay oo aan ogaaday inaan ka shaqeynayo bilowga yaryar ayaa aniga i halaagay! Marnaba ma qiyaasi karo naftayda oo aan dib ugu noqonayo hawl maalmeedkii.
Qoraal wacan! Waxaan ka shaqeeyey xirfadayda oo dhan bilowga waxaanan u qoraa maqaallo ku saabsan boggeyga ku saabsan bilowga.
Waxaa jira xaqiiqooyin adag oo qabow oo ku saabsan adduunka bilowga kuwa tixgelinaya waa inay ogaadaan:
1. U shaqeynta bilowga waa khamaar Xitaa haddii aad joogto heer lammaane / milkiil. Hal qashin ayaa burburin kara ururka oo dhan. Waxaan arkay bilaw aan la tirin karin oo fashilmay, maxaa yeelay hal aasaasi ayaa qaatay go aan go'an oo kaliya oo uu ku waxyeelleeyo shirkadda si aan laga soo kaban karin.
2. Mushaaraadku waxay qiyaastii 40% ka hooseeyaan heerarka shirkadaha waaweyn. Faa'iidooyinka lama barbar dhigi karo (inta badan).
3. Inta badan, usbuucyada shaqadu way KA BADAN YIHIIN kuwa shirkadaha adduunka.
4. Suurtagalnimada in shirkadaadu hoos tagto intaad xilka hayso tenure qiyaastii 60% (waxay kuxirantahay cida baaritaanka ku sameysay nambarada).
5. Waa inaad noqotaa mid waalan, sida baastada ramen, ama aad leedahay keyd kuu oggolaaneysa halista.
Waxaan hayaa hawlgallo hoggaamineed oo ka bilaabmay 20 illaa 100 qof 2 sano gudahood (welina way sii kordhayaan) mid kale oo ka socday 10-50 6 bilood gudahood (weli way ku jiraan ganacsi). Laakiin sidoo kale waxay ahayd inaan mid xiro oo aan ka tago mid kale, maxaa yeelay waan ogahay inay hoos mari doonaan (markale). Ma xamili kartaa isbedelka?
Bilowga adduunka waxaa loogu talagalay kuwa caloosha u leh oo diyaar u ah inay noqdaan kuwo aad u jilicsan. Haddii aadan ahayn, ka fogow.
Waxay u eg tahay ganacsiga makhaayadaha, dhammaantood waa qurxoon / jacayl / qurux ka baxsan, laakiin PURE HELL gudaha. Qof kasta oo kuu sheega haddii kale waa sarreeyaa, wuu kaa buuxaa waa ogyahay waxa uu yahay, ama wuu cabbay koolaid aad u badan.
Apolinaras - aad baad ugu mahadsantahay fikradaada ku saabsan tan. Waa nolol xiiso leh, hubaal - dhalinyarada qaangaarka ah ee shaqooyinkooda ugu horreeya u baahan inay fahmaan farqiga weyn.
Waan kugu raacsanahay aragtidaada ku saabsan bilowga howlaha guud ahaan. Waa in la sheegaa si kastaba ha noqotee, in dhammaan khibradaha bilowga ah ay ku saleysan yihiin awoodaha hoggaamineed ee aasaasaha (yaasha).
Hoggaaminta liidata iyo tan ka hooseysa celceliska xirfadaha maaraynta guud ahaan waxay u horseedaa khibrado xun halka hoggaan wanaagsan iyo ka sarreysa celceliska awoodaha maareynta ay ka dhigi karaan khibrad qiimo leh haddii ganacsigu guuleysto ama guul darreysto.
Ma hubo in 'khibradda' oo dhan ay ku jirto aasaasayaasha. Marar badan aasaasayaashu waa ganacsato iyo figrad dad. Mararka qaarkood kuma fiicna shaqaalaynta, iibinta, suuqgeynta, lacag uruurinta, howlaha, iwm - uma maleynayo inaad ku eedeyn karto iyaga oo aan laheyn xirfadihii oo dhan.
Bilaabashadu waxaa lagu qasbay inay ku baxaan addin iyo inay maalgashi weyn ku sameeyaan hibada - qaarbaa shaqeeya, qaarna si daacadnimo ah ma sameeyaan. Maaddaama Apolinaras uu sheegayo, taasi waxay la wareegi kartaa shirkadda oo dhan.
Aasaasayaashu waxay sida ugu fiican ugu shaqeeyaan waxa ay haystaan. Mararka qaarkood kuma filna. Taasi waa halista bilowga!
Maqaal wanaagsan! Iyo faallooyinka soo socda. Waxaan u maleynayaa in bilowga la soo qurxiyay oo laga dhigay mid sahlan. Haddii aad runti tahay oo aad horumarinayso wax ka badan meherad guri, waxay noqon kartaa mid si qoto dheer u murgooda. Markaad u shaqeyso mid, waa inaad diyaar u ahaataa inaad la kulanto meelaha sare iyo kuwa hooseeya oo ay la socdaan milkiilayaasha.
In kastoo aad u maleyn karto inaad taas fahantay, ilaa aad halkaas ka joogtay…
Maqaal runtii aad u fiican isla markaana waqtigiisa ku habboon sidoo kale. Waxaan ka fikirayay inaan ka sii guuro markaan joogo maxaa yeelay ma hubo waxa ku soo kordha mararka qaarkood aniga. Waxaa jira waxyaabo aan doonayo inaan barto oo aan kari karin ilaa iyo haddii aan ku iibin karno waxyaabaha la isku haysto. Waa caqabad markii lala shaqeynayo warshadaha HR.
Si kastaba ha noqotee, opoprtunity-ka aan arko ee igu kalifay inaan ka sii fiirsado xitaa waa wakaalad xayeysiis bilow ah .. Maqaalkani wuxuu runtii iga dhigayaa inaan ka fekero waxyaabo bilaha soo socda oo aan arko meesha qalbigeygu jiro.
Jan 8, 2009 saacadu markay ahayd 12:37 PM
Farriin weyn. Dhamaan waa la i ruqseeyay si aan saameyn ugu yeesho shirkada yar ee aan ku noolahay - er, shaqada - at. Bilaabis ma ahan, laakiin weligiis waa isbedelaya.
Jan 8, 2009 saacadu markay ahayd 5:22 PM
Waxaan qalin jabiyay laba sano ka hor runtiina waxaan isku dayay inaan shaqaale ka noqdo dhawr shirkadood oo bilow ah. Dhibaato ayaa i soo martay. Waxaan marwalba dareemayay xirfadaheyga iyo anshaxdayda shaqada inay kufiicnaan laheyd bilaabis. Waxaan rajeynayaa inaan bilaabo mid ama aan u shaqeeyo mid ka mid ah booskeyga xiga, markasta oo ay taasi noqon karto.
Jan 8, 2009 saacadu markay ahayd 7:42 PM
Waxaan u maleynayaa in u shaqeynta bilowgu ay fiicnaan laheyd. Laakiin sidoo kale waxay ka timid fikradda ah inaan doonayo inaan noqdo ganacsade oo aan ku raaxeysto kor u kaca iyo hoos u dhaca iyo qaab nololeedka xiisaha badan. Taasi waa waxa aan rajeynayo bilowga ah oo aanan u maleyneynin in shirkado badan oo waaweyn ay i siin doonaan.
Si kastaba ha noqotee waxaan arki karaa sida qaab nololeedkaas uusan ugu habboonayn qof walba markaa runti waxay kuxirantahay waxaad raadineyso xirfad.
Jan 8, 2009 saacadu markay ahayd 8:07 PM
Boostada wanaagsan, sidii caadiga ahayd.
Waxaan u muuqdaa inaan kugu raaco, guud ahaan.
Laakiin, dhowr qodob oo dheeri ah ayaa ah:
1) Waa guur - anigu waan bixiyaa, adigaa siiya.
Mararka qaarkood taasi way ku luntay tarjumaadda bilowga. Ikhtiyaarrada saamiyada ayaa noqon kara silsiladaha dahabiga ah ee wanaagsan ee tan, laakiin bilowga ah ee ku qasbaya qiyaasta qiyaasta qiimaha sare ee shaqo joojinta ayaa isla markiiba ka soo horjeedda shaqaalahooda, gaar ahaan sababta oo ah mushaharka bilowga bilawgu caadi ahaan ma ahan celceliska suuqa.
2) Shakhsiyadda iyo Waxqabadka
Nasiib darrose, inta badan bilowga waxaa hogaamiya shaqsiyad iyo go'aan gaaris aan caadi aheyn oo saameyn ku leh shaqaalaynta iyo shaqada. Waxaad jeclaan lahayd inay tani noqoto waxqabad ku saleysan
3) Hoggaamintu waa furaha
Ganacsaduhu maahan inuu leeyahay dhammaan xirfadaha, laakiin waxay u baahan yihiin inay yeeshaan caqli ay ku dheellitiraan cilladahooda oo ay u dhagaystaan ​​dadka ku hareeraysan si macno leh
4) Shaqaale badinta
Tani waxay u muuqataa mid ku fiican warqad, laakiin dhab ahaan maahan qofka shaqaalaha ah ee aan fahmin sida xirfadahoodu aysan ula soconaynin xawaaraha, gaar ahaan haddii hogaaminta iyo shaqaaluhu ay da 'yar yihiin iyagoon lahayn xirfad buuxda oo ay iyagu isku dejiyaan si ay uga gaashaantaan su'aalaha, sida badanaa kiiska shirkadda marxaladda hore.
5) Dadku waxay fiiriyaan # 1
Cawaaqib xumada ka dhalan karta shaqaalaha sare ee aan ikhtiyaari ahayn ma wanaagsana. Dhiirrigelinta cabsi weligeed caafimaad ma leh. Dadku shaqooyinka ma galaan iyaga oo maanka ku haya shaqadooda xigta, markaa haddii asxaabtu dhacdo resumeygu wuu fiiqaa.
Guud ahaan, markale, waan ku raacsanahay inta badan waxaad dhahday, laakiin waxaan u maleynayaa inaad tan ku eegeyso muraayadaha muraayadaha.
Shirkadaha bilowga ah ee ugu guulaha badnaa xilligan la joogo (Google) waxay ula dhaqmaan shaqaalaha si xushmad leh, ee ma ahan sidii gacmo la kireystay oo loo isticmaalo aalad ikhtiyaari u leh.
Waxyaabaha aan mar walba ugu soo laabto jawiga bilowga waa isfaham - haddii aad dhisi karto xiriir iyo is afgarad hoggaankaaga markaa waa habboon tahay. Haddii hoggaankaagu ka fogaado, istaago, shabakad, jarjar oo la qalajiyo oo uu kaa tago inaad xoqdo madaxaaga markaad la kulanto miisaanka culeyskooda qayb ka mid ah 2 ama 3X markaa iyagu ma helayaan oo waxaa ku khiyaaneeyey iyaga iskaa u gaarka ah iyo nabadgelyo darrada.
Jan 8, 2009 saacadu markay ahayd 8:08 PM
Farqiga kaliya ee rasmiga ah ee udhaxeeya bilowga iyo shirkad la aasaasay waa da'da ururka.
Wixii intaas ka dambeeya, wax kasta oo shirkaddu waxay ka dalban kartaa shaqaalaha saacado badan, inay siiso qado bilaash ah, inay dadka si liidata u magdhabaan ama ay u qaataan fikradaha cusub. Shirkadaha bilowga ah ee maalgalinta leh ayaa laga yaabaa inay malaayiin ku leeyihiin bangiga, shirkadaha 100 sano jir ahna waxay la kulmi karaan arrimaha lacag bixinta. Maamulayaal caaqil iyo macangag ah ayaa meel walba ku dhuumaaleysanaya.
Da'da shirkaddu waa inaysan ogeysiin go'aannadaada xirfadeed, laakiin dhaqanka iyo aaminsanaanta kuwa ka tirsan ururkaas. Ha waydiinin inaad rabto inaad kashaqayso ama aadan rabin. Soo ogow tayada aad ka hesho kuwa ugu xiisaha badan shirkadaha xiisaha leh. Iska indha taariikhda ka mid noqoshada oo raac riyadaada.
Jan 8, 2009 saacadu markay ahayd 10:39 PM
Waxaan doonayaa inaan si xushmad leh u diido, Robby.
Da'da kaliya maaha farqiga u dhexeeya. Badanaa Startups waxay ka shaqeeyaan lacag amaah ah oo leh awood dhaqaale iyo mid dadba. Waxay ku jiraan cadaadis aad u weyn si ay u koraan oo ay u gaadhaan habsami u socodsiinta sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah.
Dhaqanka iyo aaminsanaanta ayaa aad uga miisaan culus badbaadada saafiga ah bilowga shirkadda. Fiiri shirkad kasta oo weyn oo maanta leh dhaqan iyo caqiidooyin aad raadineyso waxyarna waan khamaarayaa in ayan helin fursadahaas markii lagu xirayey lacag caddaan ah, deyn, iyo u jawaabista maalgashadayaasha buuqa!
Waxaa jira xoogaa taageerayaal samafal ah iyo 'cagaaran' shaqadayda, laakiin ma lihin wax faa'iido ah oo aan ku caawin karno beddelidda adduunka (weli).
Jan 9, 2009 saacadu markay ahayd 7:21 PM
Hadaladaadu waxay muujinayaan qoraalkaaga guud, oo aan aaminsanahay inay tahay sheegashada inay jirto farqi baaxad leh, aasaasi ah oo saameyn ku leh ururada dhalinyarada iyo waayeelka. Si kastaba ha noqotee, waxaan la socdaa waxyaabaha soo socda:
Waxaad wax ka qoreysaa shirkadaha “ka shaqeeya lacagta laga soo amaahday oo leh awood dhaqaale iyo mid dadba. Waxay ku jiraan cadaadis aad u weyn si ay u koraan oo ay u gaadhaan habsami u socodsiinta sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah. Tani waxay u egtahay sharaxaadda saddexda gawaarida waaweyn, mid ka mid ah hay'ado badan oo bangiyada oo dhowaan fashilmay, ama runtii wax kasta oo shirkadda halganka Kuma koobna bilowga.
Waxaad sidoo kale ku adkaynaysaa in "dhaqanka iyo caqiidooyinka ay aad uga culus yihiin bad baadinta bilowga shirkad." Laakiin guuldarradu ma aha inaad sii noolaato maxaa kaa kaxeeyey shirkad weyn oo ganacsi oo wargeys ah? Waxaad sheegaysaa inay ahayd meel aad u xun in laga shaqeeyo laakiin adigu ma aadan ahayn kii bilaabay joojinta.
Ugu dambeyntiina, qodobkaaga seddexaad wuxuu u muuqdaa mid ku qanacsan in "ka caawinta beddelidda adduunka" ay u baahan tahay faa'iidooyin. Kiva, Fartaet iyo dabcan GNU / Linux dhammaantood waa kuwo bilow ah oo horay uga faa'iideystay adduunka, iyagoon aad uga fikirin faa'iidadooda.
Ujeeddadayda ayaa ka duwan. In kasta oo ay jiri karaan qaar ka mid ah tayada aadka isugu xidhan, farqiga kaliya ee gabi ahaanba la hubo ee u dhexeeya shirkadaha bilowga ah iyo loo shaqeeyaha dhaqameed waa da'da. Waxaan kula tartami lahaa qof kasta oo ka fikiraya inuu raadsado (ama ka fogaado) shaqaalaynta bilowga si aan isu waydiiyo waxa aaminsanaanta da'da ku wargelisay aragtidooda.
Uma maleynayo in farriintani ay tahay mid cilmiyaysan ama wax tar leh. Markaad go'aansaneysid meesha aad rabto inaad ka shaqeyso, da'da shirkaddu waa meel aan macquul ahayn oo laga bilaabo. Halkii, qofku waa inuu tixgeliyaa warshadaha, qiyamka, anshaxa shaqada, dhaqanka goobta shaqada, iyo shakhsiyaadka kuwa aad kula kulanto urur kasta.
Dookha xun ee shirkadaha bilowga ah ama shirkadaha dhaqameed, feker ahaanteyda, waa qaab da 'weyn. Hadaan nahay shaqa-doone takoorid ah, waa inaan qiimeyno loo shaqeeyaha aasaaska u ah shuruudaha macnaha leh. Tani kuma jiraan taariikhda isku darista.
Jan 9, 2009 saacadu markay ahayd 4:40 PM
Waxaan ka shaqeynayay bilow ah 5-tii bilood ee la soo dhaafay waana ku raaxeystay. Waxaan ku galineyna kheyraadkeena ugu yar dib u habeyn iyo hagaajin sireed. Farxad badan ayaa iiga muuqata mustaqbalka sanadka soo socda sida ay tahay inay ula jirto dadka ku jira bilowga. Waan ogahay inay jiri doonaan shaqo dheeri ah oo soo socota iyo riixitaan dheeri ah oo ka socda bogga 6da bilood ee soo socota, laakiin waxaan rajeynayaa inay waxbadan bixin doonto oo aanan xirneyn. Maaha qof walba, laakiin ma doonayo shaqo dhaqameed.